Category: ရတနာ 0
12>> Category: ရတနာ
Nectarine - ကယ်လိုရီ
မက်မွန်၏ မ Peach နီးကပ်ဆွေမျိုး။ ပြင်ပမှဤအသီးအပွအလွန်ဆင်တူပေမယ့် nectarine ချောမွေ့တဲ့အသားအရေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုတိယနာမည်က - goloplodny မက်မွန်။ ဤလှပသောနှင့်အရည်ရွှမ်းအသီးကမ္ဘာအဝှမ်းကလူသိပ်ကြိုက်လားဖြစ်သည့်ဟာအကောင်းဆုံးအရသာရှိပါတယ်။ Nectarine လူ့ကျန်းမာရေးကိုအလွန်အကျိုးရှိသည်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ကကုန်ကြမ်းနဲ့အခြောက်လှန်း form မှာအဖြစ်အသုံးဝင်သည်။ ထို့ပြင်ဤအသီးအပွကြောပိတ်ဆို့မှုများနှင့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသို့သူတို့ကိုလှည့်, ဖုတ်စည်သွတ်တဲ့အရသာစွပ်ပြုတ်, ရှိနိုင်ပါသည်။ ကယ်လိုရီ nectarine မအနိမျ့ကယ်လိုရီ nectarine ကဒီအသီး၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘယ်နှစ်ယောက်ကယ်လိုရီ nectarines အတွက်ကြောင့်များ၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်, 100 ဂရမ်နှုန်းအသီး၏ပျမ်းမျှကယ်လိုရီ (တစ်ဦးအဖြစ်တာကချွတ်ချွတ် nectarines နှင့် ပတ်သက်.
အများစုကအမျိုးသမီးများကိုသူတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နာကျင်ကိုက်ခဲကျောရှိသည်သောအချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျကြသည်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတစ်ဦးအလေးချိန်ပါရရှိသကဲ့သို့, သဘာဝပြည်နယ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုဆိုင်းသို့ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းနှင့်ကျောရိုးပေါ်တွင်ဝန်တိုးပွားစေပါသည်။ သစ်တစ်ခုပြည်နယ်မှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဤသို့ပြင်းထန်နောက်ကျောနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခါးမှာနောက်ကျောတင်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ နှင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားလျှင်ကိုယ်ဝန်ရ်ရှေ့တော်၌နာကျင်မှုကိုအများကြီးအားကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်, လက်ျာဘက်ကျောမဟုတ်ခဲ့။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖို့တခြားအဖြေတွေရှိပါတယ်: "?
ကိုဆန့်ကျင်-ရောင်ရမ်းနံ့သာဆီ - phospholipase ကတော့ပိတ်ဆို့ခြင်း, ရောင်ရမ်းပြုပြီ (histamine, kinin, lysosomal အင်ဇိုင်းတွေ, တစ်ပြိုင်တည်း) ၏လှုပ်ရှားမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖိနှိပ်မှုလွှတ်ခြင်းကိုတားဆီးခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောတစ်ရှူးရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရာ၏ဤမူးယစ်, နှင့်အခြားသူများ။ Anti-inflammatory ဆီ များအသုံးပြုမှု မလိမ်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်အသုံးအများဆုံး Anti-inflammatory ဆီ (အရေပြားနှင့်ချွဲအမြှေးပါးမှလျှောက်ထား) ။ သို့သော် intervaginalnogo, rectal နှင့်ခံတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အလားတူနည်းလမ်းလည်းရှိပါတယ်။ မဆန့်ကျင်ဆီကျယ်ပြန့်, အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းမတည့်, ကူးစက်ရောဂါ, နှင့်အခြားအရေပြားရောဂါများကိုကုသရာတွင်ဆေးဝါးကုသမှုကုထုံးအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအပိုဆောင်းကုထုံးအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ လည်းဆီ anti-inflammatory မှလွဲ.
New ကိုပုတ်ခတ်ဒီဇိုင်း, 2014
မ Excellent ကမိန်းကလေးစနစ်တကျရွေးချယ်ထားနောက်ပြီး၏ပုံရိပ်ကိုဖို့အထူးအရသာတတ်၏။ 2014 ခုနှစ်တွင်ခေတ​​်မှီပုတ်ခတ်ဒီဇိုင်းပန်းများနှင့်အတူဂိမ်းအဖြစ်လက်သည်းရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများလျှောက်လွှာကိုမှအာရုံစူးစိုက်ဆွဲငင်။ ကျနော်တို့ကကိန်းဂဏန်းကိုသုံးလျှင်, သင်ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်လျှင်, တမူထူးခြားတဲ့စတိုင်ထောက်ပံ့။ အမေရိကန်နောက်ပြီး အရောင်တင်ဆီ၏တောက်ပသောအရိပ်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်ပေးသော ဒီတော့ဟုခေါ်တွင်ဒီဇိုင်းကိုတိုတိုလက်သည်း, 2014 သို့မဟုတ်တူညီသောအရှည်။ ဥပမာသင်အနီရောင်, turquoise နှင့်လိမ္မော်ရောင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီအအရောင်ချမ်းသာမှတ်မိလွယ်တဲ့ခဲ့, အဲဒီနောက်လက်သည်းပေါ်တွင်သင်လက်သည်းဆိုးဆေး၏ထိပ်ပေါ်တွင်တစ်ဦးဆွဲစေနိုင်သည်ကို၎င်း, တောက်တောက်အပေါ် အခြေခံ.
အမျိုးသမီးရဲ့တိုတောင်းသောဆံပင်ပုံစံတွေကို 2014 ခုနှစ်
လာမယ့်နှစ်တွင်, မိန်းမတို့အဘို့အဆိုပါစတိုင်တိုတိုဆံပင်ပုံစံတွေဖက်ရှင် Olympus တို့၏အပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ကပြောင်းလဲပစ်ရန်အချိန်ရဲ့နားလည်သဘောပေါက်နှင့်စတိုင်နှင့်ချစ်စရာကောင်းကိုကြည့်ချင်အတူတူအိပ်မက်များနှင့်အတူလေ့လာမှုနှင့်လက်ရှိ hits အသွင်ပြောင်းလျှင်။ ရဲ့အဘယ်အရာအားလုံးအတူတူပင်ကျက်သရေနှင့်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေတိုတောင်းခေါင်းဖီးကြည့်ကြစို့။ အပေါ် အမျိုးသမီးရဲ့ဖက်ရှင်တိုတိုဆံပင်ဖြောင့်တဲ့ဆံပင် rectangular နှင့်ဘဲဥပုံလိုင်းများ quad ကြော့နှင့်အထင်ကြီးကြည့်ရှုပါ။ ဆံပင်သည်သင့်လျော်သည်တစ်ဦးအထူ Bang အဘို့, အဲဒါကိုတုံးဖြတ်အတူဖျော်ဖြေစေခြင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူမ၏ရှည်လျားနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုကြောင့်မျက်ခုံးအထိဖြစ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ။ သို့သော်တစ်ဦးပေါက်ကွဲသံကြီးစွန်းတိုင်အောင်မပါဘဲကောင်းသောရူပနှင့်ပြစ်ဒဏ်အားဖြင့်တစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေထွန်းလင်းဖြည့်စွက်, မော်ဒယ်လ် gel ဟာကိုအလေးပေး။ မ elongated အ strands နှင့်အတူထိန်သိမ်းတဲ့ပတ်ပတ်လည်တွင်မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူချဉ်းကပ်မှုမိန်းကလေးငယ်များ lateral ။ ဘွဲ့ရခြင်းနှင့် texture Bob ကိုအထူးခြင်း simulation ပုံစံထုတ်ကုန်များ၏အကူအညီဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ တစ်ညှစ်သံမြည် 2014 !
ruffles နှင့်အတူ Dress
မ Shuttlecocks နှင့် ruffles နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခိုင်မြဲ၏ပုံရိပ်ကိုပေးသည်တစ်ခုအလှဆင် element ကိုဖြစ်ဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်။ လှပတဲ့အသွင်အပြင်များအပြင်၌, ruffles နှင့် flounces နှင့်အတူစနစ်တကျတပ်ဆင််စားဆင်ယင်ပုံသဏ္ဍာန် adjust နှင့်သူမ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပေါ်လွင်နိုင်ပါ။ မ ruffles နှင့် flounces နှင့်အတူဆင်မြန်း, အဘယ်ဒီဇိုင်နာကျွန်တော်တို့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကြသလဲ ဖက်ရှင်အိမ်ခြေအားလုံးနီးပါးကို collection များကို flounces နှင့်အတူညဦးယံအချိန်အတော်ကြာမော်ဒယ်များနေ့တိုင်းဆင်မြန်းရှိသည်။ ဒီဇိုင်နာများဘယ်နေရာမှာမဆိုအထည်, ဖြင့်မျက်နှာပြင်နှင့် feature ကို ruffles အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ : အများစုကတော့သင်အောက်ပါ options ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အလျားလိုက် ruffles (သူတို့အပေါငျးတို့ဝတ်စားဆင်ယင်ကျော်သာသေချာသောဒေသများအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ);
အဘယ်အရာကမျှကို tan မျဉ်းတားနှင့်အဖြူအဖြစ် image ကိုလန်းဆန်းစေသည်။ ယခုရာသီအလေးပေးခြေလျင်ဖန်ဆင်းတော်နှင့်၎င်းတို့၏အဖြူဘောင်းဘီကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူတို့အားပူပြင်းတဲ့နွေရာသီအားကစားဘောင်းဘီတိုကိုအကောင်းဆုံးယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ?